के शेयर बजारमा घट्दो प्रवृत्तिको अन्त्य भएकै हो?
काठमाडौं, माघ ५ : साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार ट्रेडिङ्ग समूहमा बाहेक अरु सबै समूहमा एक प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि रहेको छ। सर्वाधिक वृद्धि हुने उपसूचकहरुमा निर्जीवन बीमा र जीवन बीमामा क्रमशः ६ दशमलव ४५ र ६ दशमलव ०२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
बैंकिङ्ग समूहमा भने १ दशमलव ५४ प्रतिशतले वृद्धि देखिएको छ। यसरी प्राय जसो उपसूचकमा वृद्धि हुनुलाई सकारात्मक मानिन्छ। नेप्से परिसूचक ३३ दशमलव ४३ अंकले बढेर १३४३ दशमलव ६५ को विन्दुमा बन्द भएको छ।
दोस्रो बजार २ दशमलव ५५ प्रतिशतले बढेको छ। १३१० दशमलव २७ को विन्दुमा खुलेको दोस्रो बजार १३४९ दशमलव ११ को उच्च विन्दुसम्म पुगेको थियो। कारोबार खुलेको विन्दु नै न्यून विन्दु रहेको छ।
दुई अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। कारोबार रकम बढेकाले यसलाई पनि सकारात्मक मानिन्छ।
आज सबैभन्दा धेरै हिमालयन डिष्टिलरीको शेयर किनबेच भएको छ। हिमालयन डिष्टिलरीको १२ करोड १५ लाख बराबरको शेयर किनबेच भएको छ।
आज लक्ष्मी इक्वीटी फण्डको इकाइधनीले सर्वाधिक १० दशमलव ०५ प्रतिशतले कमाए भने स्वाभिमान लघुवित्तका शेयरधनीले सर्वाधिक ६ दशमलव ६९ प्रतिशतले गुमाए।
अघिल्लो दिनको विश्लेषण अनुसार यदि बजार १३१४ भन्दा माथि स्थिर रहे बजार अझ केही सकारात्मक हुन सक्ने देखिन्छ। अर्को तत्कालीन प्रतिरोध १३२५ को क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ भनिएको थियो।
आज बजारले १३१४ को प्रतिरोधलाई निश्चित रुपमा तोड्न सफल रहेको र हाल १३५० को मुख्य प्रतिरोधलाई सामना गरिरहेको देखिन्छ। बजारका उच्च विन्दु १३४९ दशमलव ११ रहे पनि नेप्से परिसूचक १३४३ दशमलव ६५ विन्दुमा बन्द भएको छ।
चित्र नं १ मा दैनिक मैनबत्ती विश्लेषण अनुसार हाल बजार बढ्दो प्रवृत्तिमा रहेको र मुख्य प्रतिरोध क्षेत्रलाई सामना गरिरहेको देखिन्छ। तीन दिनको मैनबत्तीले ‘थ्री वाइट सोल्जर’ को आकृति बनाएको छ। यसले बजार केही सच्चिए पनि बजार पुनः सकारात्मक हुन सक्ने संकेत गर्दछ। दुई साताअघि पनि यस्तै आकृति बनाएको थियो। परिमाणले आजको मैनबत्तीलाई समर्थन गरेको देखिन्छ।
चित्र नं. २ मा, तीन दिनको कारोबार कस्तो रह्यो भनेर हेर्नलाई पाँच मिनेट समयावधिको मैनबत्तीलाई प्रयोग गरिएको छ। तीन दिनदेखि बजार बढ्दो प्रवृत्तिमा रहेको छ।
२१ र ५० समयावधिको एक्सपोनेन्सियल मुभिङ्ग एभरेज (ईएमए)हरुले बजारमा क्रेताको चाप रहेको संकेत गरेको छ।
रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्स (आरएसआई) ५९ दशमलव ८९ अंकमा रहेको छ। कारोबारको अन्तिम समयमा आरएसआई र स्टोकास्टिक अक्सिलेटरले बजार केही सच्चिन सक्ने संकेत गरेको छ।
निष्कर्ष : छोटो समयावधिको बजारको प्रवृत्ति र सूचकलाई समग्र रुपमा हेर्दा बजार १२५० विन्दुभन्दा माथि स्थिर रहनु नै सकारात्मक रहेको देखिन्छ। तीन वर्षदेखिको घट्दो प्रवृत्ति अन्त्य हुन सक्ने प्रवल सम्भावना रहेको देखिन्छ।
हाल बजारले अर्को १३५० को मुख्य प्रतिरोध क्षेत्रलाई सामना गरिरहेको देखिन्छ। समग्रमा हेर्दा यदि बजार १३५० भन्दा माथि स्थिर रहेमा बजार पुनः बढ्दो प्रवृत्तिमा हुन सक्ने संकेत गर्दछ। अर्को तत्कालीन प्रतिरोध १३८० को क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ। हाल बजारको तत्कालीन सामान्य टेवा १३२५ को क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ।
Published Date: Sunday, 19th January 19:46:09 PM
शेयर बजार थप सकारात्मक संकेत, अब के होला?
नेप्सेका सबै उपसूचकमा वृद्धि
शेयर बजारमा थप सकारात्मक संकेत, अब के होला ?
नेप्से ४.६० अंकले बृद्धि तर पनि लगानीकर्ता अन्योलमा (प्राविधिक विश्लेषण सहित)
लघुवित्त, निर्जीवन विमा र म्यूचल फण्डका शेयर बृद्धि
शेयर बजारमा आज ४ दशमलव २८ अंकको वृद्धि
शेयर बजार सकारात्मक, अब के होला ?
शेयर बजारमा लघुवित्त समूहमा खरिदकर्ताको चाप
आज शेयर बजार ५ दशमलब ५२ अंकले बृद्धि